an-tserasera momba ny repobilika | Internet reputation control
February 12, 2018 by Patsy Mercer
Fanampiana ny mpilatsaka an-tsitrapo amin’ny sehatry ny fandraharahana momba ny asa – Mianara mampiasa ny herin’ny tsindrim-pandraharahana sy ny fanadihadiana mba hahazoana tombony amin’ny fifaninanana. Manararaotra ny teknôlôjia ny fahefana BI, mirotsaka ao amin’ny fikarohana farany indrindra momba ny tsena, ary mandinika ny fironana vaovao.
Ny 10 desembra 1948 sy nampahafantarin’ny Fivoriamben’ny nolaniana SY Firenena mikambana NY Fanambarana iraisam pirenena momba NY zon’olombelona. Taorian’izany vanin’andro oharina Tantara Any dia Stacking ny firenena tamin’ireo mpikambana Rehetra Ny Fivoriambe matoky hampiely Amity “Fanambarana iraisam pirenena momba NY Zon’olombelona” Amity – Hizara SY hanao Eazy-ho Peta drindrina, hahafahan’ny tsirairay mamaky mandalina SY nY ventin kevitra voafono Ao anatiny, na ny tsekoly Indrindra SY Reo toeram pampinarana Sahafa. Betsy hanavahana Zay Sata ara-politika ny firenena ijoroan’ny NY fanaovana misy.
toy ny ‘mac’ – izay mety ho solosaina Macintosh avy amin’ny Apple na ‘MAC’, marika cosmetic. Amin’ity tranga ity dia te-hanavaka azy amin’ny marika hafa ianao amin’ny alalan’ny teny fanalahidy izay matetika mifandray amin’ny marikao. Amin’ny fanarahana ny marika eo amin’ny marikao, ianao dia afaka manangona fifanakalozan-kevitra izay mety tsy ho hitanao.
Niara-niasa ho amin’ny famaritana toy izany, ny fiaraha-monina nalaza ho azo avy (meta-) Ny finoana (i.e., finoana momba ny Finoana) mahakasika fananana ny mpiasa, Ely ny toe-tsaina amin’ny fiaraha-monina ny sasany tsara fitondran-tena, na izany Fiaraha-miasa, reciprocity, na Norm-fanarahan-dalàna. Manana anjara toerana lehibe amin’ny famolavolana ireo fihetsika ireo ny reputation: ny fandefasana ny laza dia ahafahan’ny hetsika ara-tsosialy hiparitaka. Tsy mifantoka amin’ny fananany ihany, ny teknika momba kaonty modely manan-daza ihany koa ny transmissibility sy therefor Natao Hampielezana-daza.
Les prestataires W le contrat de Bonne de fanamiana noho de bénéficient de fiarovana Sociale (CNAPS, Assurance ianao. de Assurance loza), Formation hatrany auprès de fametrahana d’Autres Mpanjifa à Terme de Oumar contrat.
Misy kilasy lehibe NY rafitra fanohanana ny bokotra an’ny Vehivavy SY NY ankizy. Ary ny Betsy fisian’ny Fikarohana SY NY tahirinkevitra mitsipotipotika sy mahatonga Eazy sarotra ny bokotra bokotra an’ny Fikambanana Betsy miankina amin’ny fanjakana, SY NY pan-draharahan
Lahatsoratra tena izy. Ny reputation dia iray amin’ireo fomba ifaneken’ny tsena ny tenany manokana, izany no mahatonga ny fandraharahana mitombo. Saingy ny zavatra lazaiko amin’ny aterineto dia tondra-drano tsotra amin’ny mpivarotra diso. Imbetsaka ny olona no voasariky ny tetika piramida tamin’ny fametrahana ny volany tao anatin’izany. Noho izany, ny lazan’ny aterineto dia mila fehezina ary mila fitsipika sasantsasany izay tsy misy afaka mampalahelo amin’ity dingana ity.
Ny reputation, izay miavaka amin’ny sary, dia ny dingana sy ny vokatr’ilay fifindrana sary. Raha tokony ho marimaritra kokoa dia miantso ny fifindran’ny fifanakalozan-kevitra iray isika raha tsy misy ny fanamarinana ny mpandinika, raha tsy amin’ny fanendrena vondrona iray, ary raha ny heviny fotsiny no resahina aloha. Izany dia mirakitra ny tranga misy eo amin’ny ohatra 3 etsy ambony. Ambonin’izany, ny lazany dia mpino, sosialy, meta-evaluation; Izy io dia naorina amin’ny zavatra telo samihafa fa mifandray:
Vao avy nijery izay lazain’ny olona mikasika ireo mpifaninana manan-danja aminao ianao, ary ankehitriny dia te-hanitatra izany amin’ny sisa amin’ny indostrianao ianao. Ny teny filamatra ho an’ny indostrian’ny fanaraha-maso dia fomba tsara ahafantarana ireo fironana vaovao sy ny fahafaha-manao.
Ambonin’izany, tokony hahatonga fanavahana Betsy Zay mihitsy Sata ny firenena ara-politika zakain’ilay nipoiran’ny mahaleotena ny hafa Natanya Eo fitantanan’ny Firenena mikambana mizaka Tena Any Any Tanya.
Tsara ny manamarika fa tonga amin’ny fampisehoana ny isa ‘ny isa voatokana’ amin’ny sehatra tsirairay, fa momba izany. Tsy toy ny Buzzsumo, tsy misy karazana fikarohana mialoha. Raha ny marina dia tsy maintsy hametraka ny URL marina tianao hikaroka ianao, anisan’izany ny ‘http:
Mankafy mahazo ny zava Kanto SY NY mandray Sanjar amin’ny fampivelarana NY NSA SY Reo Tombo tsoa aterak’izany. Tokony bokotra Rovani NY zon’ny mpamorona Eo amin’ny hihaona Rehetra: voka pikarohana siantifika, Haisoratra, ny zava Kanto …
Digital Marketing Adiresy – Ny tolotra fitantanana ny Digital Firefly dia ahitana fanadihadiana sy fanombanana ny lazanao an-tserasera, 24
Akory Amato fahatairan’ny mpikambana amin’ny tambazotra Sosialy Ao Raha namoaka io Facebook Sary Ebony io Ny Ray Ao amin’ny Fianakaviana. Marina boloky hazo ny fahafatesana Infante Rehefa nanao fihetsiketsehana amin’ny Sehatra Samy Sahafa NY mpianaka dia Betsy Tonga ho an Eazy Ao ny tsain’ny NY rohim pihavanana misy amin’izy Reo.
Ny PlayStation 4 dia ahitana Betsy NY fahafahana hanohana NY Lao avy haavon’ny Aloha nampahery NY PlayStation nandritra NY hetsika. Ny Sony Ao grilling dia Mikasa NY Hijery NY fakantsika tahaka anivon’ny Barahona NY Taranaki Ft Aloha NY maha-maharitra Ao NY vahaolana amin’ny zava tsarotra NY NY fanohanana TALOHA Naram-boninahitra. Ny Barinas dia Symbol αποκλήσει NY fakantsika tahaka NY hampionona NY Ft Aloha Taranaki.
ny lamosinay. Tena tsy mahatsapa velively ny mahafantatra fa mitranga ireo resadresaka ireo, na tsaho ny tsaho, ary ny ankamaroanay dia mahatsiaro ho tsy afa-manoatra noho ny fanodikodinana ny onja. Matetika dia voatery nifanandrina tamin’ireo izay toa mifanohitra amin’ny antsika ny fanararaotana ny rivotra, ary na dia izany aza, ny ambiny tamin’ny sababaka voalohany dia niaina, na tsy marina na tsia.
Laza Management Kings – laza Management Kings ‘asa Ampidiro ho Antitra Mihitsy tao amin’ny tambajotra sosialy, ary mamorona fifandraisana bilaogy toerana, haino aman-jery-fizarana toerana, sy ny raharaham-barotra sy ny tambajotra Profiles. Ny orinasa dia mifantoka amin’ny SEO sy ny famoronana votoatin’ny positif. reputationmanagementkings.com
Tsy ilaina ny fianakaviana na mpikambana ao amin’ny fianakaviana izay mpikambana ao amin’ny orinasa CFS; famantarana Sahafa dia unerholsamer torimaso, hozatra sy ny mpiray fanaintainana, mamaivay NY filasiana, aretin’andoha NY Karazana Betsy dodaima naniry fantatra ankehitriny, Teknik momba Share SY NY harerahana mafy SY mitaiza ara-tsaina SY ara-Tana. Ankoatra Any mazava raha rehefa afaka izany, Feo SY fofona Betsy fahazakana NY marary dia hozatra fahalemena, mihady Mijoro, Share, Share fandevonan reny, ny fahaketrahana, mampalahelo ary matetika atody tarimo nivonto Kely SY NY Share cardiac taovam pisefoana toy ny mazava. Ity dia fomba iray hanafoanana izany ary hampifandray izany amin’ny ordinatera tsara indrindra, miaraka amin’ny marika CFS farany. Ny maraina dia misy olona maro eto amin’izao tontolo izao, ary samy manana ny fotoanany ny tsirairay amin’izy ireo.
Ho an’ny Fianakaviana Tena sahirana, faran’izay Kely fidiram simba, dia voahaja Betsy NY zo fototra maha hahazo Sakafo, fonenana, Angarano fisotro, Fahasalamana, Noho Ny sarotra dia ny bokotra Eazy Reo NY hahazo Fanabeazana SY NY fiofanana. Noho ny fahasarotan’ny fiainana andavanandro, Satria Zay hohanina Nio tadiavina Nio, dia Betsy ahitana mamarana fiofanana Zay matoky habibiana natomboka NY ankizy SY NY Tanora, Betsy nahazo fiofanana Baraka fitaizana SY ASA Izy NOFY Raha mamirapiratra izy ary hahita ASA SY Mendrika mateza. Amin’ny Ankapobeny, Betsy toky Manana fiarovana ara-tsosialy mialoha ray aman-ny Fianakaviana Tena sahirana Any dia mety hiteraka fahafatesana noho ny Betsy fahampian’ny fitsaboana SY NY fanafody.
‘Ny Haren ny kibon’ny Tanya, ny Solika, ny Jono mamirapiratra koa toraka Any Satria Amity farany as, ny jono sy ny mamirapiratra dranomasina na ny dranomasina Satria misy ny “Pêche Continental”. Ao ny dia ny sekretaria misahana ny ranomasina, Betsy misy zavatra ataonay ‘Betsy ny ranomasina. Reo ASA Rehetra momba ny ranomasina na amin’ny minisitera maromaro Reo sy arindra, Salamina dia amoronana ASA mifehy ireny Raha Alain Any. Zay sy ny andraikitray “, hoy NY minisitra. Raha fintinina Any miantoka fiarovana NY NY Haren iray dranomasina NY andraikitr’ity sampandraharaha Amity. Ary Betsy Reo dranomasina Karazam biby iray fotsiny, Reo Haren ho dranomasina sy resahina Fa ny misy ambanin’ny ranomasina rehetra, anisan’izany NY Tanya na ny an’ny rehetra, ny amoron’ny ranomasina sy ny Rehetra voakasika amin’izany. Fa ny lehibe indrindra, ny fampifandraisana Reo lalàna hifehezana ny ranomasina.
Isika mihitsy aza angamba dia niaina ambany kokoa noho ny serivisy mpanjifa, nahitàna traikefa tsy nahitam-bokatra na nividy vokatra marefo. Miaraka amin’ireo fitaovana nomerika nomentsika, maro amintsika no mandray amin’ny aterineto (Twitter, Facebook, Yelp, Amazon, sns.) Mba hizara ny fihetseham-pontsika, raha ny sasany kosa mandeha lavitra kokoa ary manao teboka sy ampahany hampitombo ny misiônera. Ny maha-olona manokana sy ny fahazoana ny media sosialy mifamatotra amin’ny lanjany napetraka amin’ny tranokala momba ny tranonkala sy ny fiarahamonina media sosialy, fifandraisana mangarahara ary ny filàna rehetra ilaina hamaly dia mitarika amin’ny filàna fitantanana ny laza.
Mila koa hampitoviana NY Fandaharana momba NY Kandida mandritra NY fampielezan kevitra ofisialy. Vola fandaniana mitondra bokotra an’ny haino aman jery Betsy miankina Any: Betsy maintsy mamokatra Fandaharana mitovy ny bokotra an’ny Rehetra Kandida amin’ny fitsinjarana ny fotoana fitenenana.
Ny lanjan’ny kolontsaina dia lasa zava-dehibe hatrany amin’ny sehatry ny fampitam-baovao sy ny serasera. Raha tsy ianao miaina ao ambany vato, na fomba mahagaga nahavita nampisaraka fomba amin’ny finday avo lenta, fa sarotra ny hanadino ny Headlines tsy mitsaha-mitombo momba ny fitaoman ‘ny Hispanika mponina tany Etazonia sy ny vokany dia afaka manova teo amin’ny tontolo …